Ny tabilao fampitahana eo amin'ny LibreOffice 4.0 sy MS Office 2013 | Avy amin'ny Linux
Tena tsara ity latabatra fampitahana ity izay hitantsika ao amin'ny Wiki ny Foundation Document, izay ahitantsika ny fahasamihafana misy eo LibreOffice 4.0 y Microsoft Office 2013. Tsy misy fatiantoka izany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » GNU / Linux » Ny tabilao fampitahana eo amin'ny LibreOffice 4.0 sy MS Office 2013
Rehefa malahelo ny fikirakirako sary sy sary izay ananan'i WordPerfect …… Tsy misy dikany izany, saingy tiako ny milaza azy.
Ho an'ireo izay mbola tsy nanandrana izany na tsy nahita an'io toe-javatra io, ao amin'ny Dropbox dia avelako 2 PPS miaraka amin'ny teny miafina izay afaka sokafana amin'ny MSOffice fa tsy amin'ny LibreOffice, OpenOffice na Calligra, raha mamaha an'io aho dia tsy miankina bebe kokoa amin'ny Office M $ .
Raha misy mahavita azy, azafady mba manome hevitra, mila mahita fampisehoana ho an'ny asa sy antony fandalinana aho ary ny sasany amin'izy ireo dia mitondra tenimiafina; Tsy mila manitsy azy ireo aho, zahao fotsiny izy ireo ary tsy te hampiasa PowerPoint mpijery na MSOffice avy amin'ny divay, tsy vahaolana ireo fa solony.
Heveriko fa ny vahaolana tokana dia ny manokatra ny pps miaraka amin'ny powerpoint ary avy eo mitahiry azy tsy misy teny miafina, na mangataka ny handefasana azy ireo tsy misy teny miafina. Azoko tsara fa ny PowerPoint dia mampiasa rafi-pandrefesana amin'ny teny miafina izay tsy tohanan'ny iray amin'ireo Office maimaim-poana. Heveriko fa ho olana momba ny patanty, loharano mikatona, sns, sns.
Rehefa manokatra amin'ny PowerPoint dia mamela ny famakiana fotsiny, tsy misy fomba fitehirizana, tsy misy ny safidy, ary ny fandefasana miaraka amin'ny teny miafina dia mazava tsara mba hisorohana ny fanovana azy ireo, ary tiako hofoanana ny fiankinan-doha amin'ny Microsoft.
Raha ny marina, ny fampandrosoana ny LO, OO, ary ny KDE Suite dia mahatalanjona, saingy ny suite maimaim-poana amin'izao fotoana izao dia misy dingana vitsivitsy any aoriana any amin'ny zavatra sasany ary misy ambaratonga maro any ambadiky ny hafa. Na dia zava-dehibe aza ny toerana mihoatra ny MSO, dia zava-dehibe na manan-danja kokoa amin'ny maro izay tsy mihoatra azy io. (Ireo tsanganana 1024 an'ny Calc, tsy haiko raha hihomehy na hitomany ohatra)
Mikasika ny latabatra fampitahana kosa, raha tsy milaza lainga aho raha hitako fa somary sarotra io, ary mitondra ny emerao any amin'ny sardine misy rindrambaiko maimaimpoana. Ohatra, ny fametrahana an'io lohahevitra firefox io dia hanome boaty maitso ho an'ny LO dia toa fipoahana. Ary toy izany, misy vitsivitsy hafa, ny sasany amin'izy ireo sy ny hafa izay tsy fantatro raha tsy tafiditra tao izy ireo noho ny tsy fahalalana na satria ny mena dia tsy dia nahaliana loatra tamin'ny ampahany LO.
Amin'izany rehetra izany dia tsy miaro na miaro ny MSO aho, mampiasa ary mbola hanohy hampiasa LO na OO (Ho an'ny zavatra sasany dia tsara kokoa izany ary ireo Apache dia manao tsara ny asany), miezaka fotsiny aho mba ho kendrena ary hilaza ny marina milaza azy rehetra.
Raha fintinina, ho ahy, ny latabatra fampitahana dia mijanona ho fanandramana tsy manjary maka tahaka ny teknikan'ny varotra ataon'ny orinasa toa MS.
debianite dia hoy izy:
Izany no nanjo ahy, tsy niaro M $ hitako fa latabatra somary lavalava ity. Ohatra, ny fampitahana ny Base sy Access. Nolazain'izy ireo ho toy ny endri-javatra lehibe ny MySQL sy ny thunderbird fa ny dbase, ny fomba fijery ary ny paradisa dia kely. Ny safidy maimaim-poana runtime Access mamela anao hampiasa ny tahiry nefa tsy manana ny fonosana rehetra napetraka dia tsy hita ihany koa.
Tiako ny Libreoffice sy ny ezaka ao ambadik'izany, saingy tsy hiaro azy intsony aho ho an'ny latabatra natao mazava hitazomana azy tsara.
Mamaly an'i debianita
Manaiky mafy, devoly.
Eny tokoa, ny latabatra, izay mbola tsara, toa nalaina tamina tweezers tamiko. Ambonin'izany rehetra izany, misy pitsopitsony amin'ny lafiny fisehoana sy fampiasa, izay raha ny fahitako azy dia ambony lavitra i MSO (ohatra, rehefa mifantina lahatsoratra ao amin'ny Word, dia misy tabilao fanovana kely hita eo amin'io efijery io). Antsoy aho hoe superficial raha tianao, saingy malahelo an'ity karazan-javatra ity aho ao amin'ny LO.
Malahelo an'io menio kely lazainao io koa aho; ary na dia tao amin'ny LO aza dia nihatsara ny fifanarahan'izy ireo, tonga tamiko fa nanao .doc tao amin'ny LO ary nanokatra azy tamin'ny M $ O; fehintsoratra na tsipika farany an'ny pejy mijanona amin'ny pejy manaraka, ary ny elanelana mitovy, ny endritsoratra ary ny habeny ary ny sisiny mitovy no ampiasako. Ao amin'ny LO, OO, tsara tarehy izy ireo, Calligra "decalibrates" it (loza izany) ary amin'ny M $ O dia tsy manaja ny endrika am-boalohany amin'ny tranga sasany.
Mbola hitako fa mitongilana ny latabatra.
Misy safidy Libre Office an'arivony izay manaitra fa tsy misy ao amin'ny MS Office, ohatra, ny fanamarinana ny tsipelina ao amin'ny sela excel.
Saingy miaraka amin'izay dia misy zavatra izay tsy voatonona akory eo amin'ny latabatra, toy ny Office Open XML support (ilay docx, xlsx ary pptx malaza).
Mikasika ireo tsanganana 1024 amin'ny kalsa, dia toa tsy dia zava-dehibe amiko izany. Saingy satria tsy manaiky ny andalana mihoatra ny tarehin-tsoratra 65534 ny mpanoratra, dia tsy azoko an-tsaina ny momba io fetra io ary toa tsy mitombina amiko izany.
Tsy nanamarina ny kaody loharano aho, fa ny fetran'ny halavan'ny fehintsoratra dia toa ahy vokatry ny fividianana toetra 32-bit, ny fanovana azy ho 64-bit dia mety, saingy mety tsy nataon'izy ireo izany hitazomana ny fifanarahana amin'ny rindrambaiko na fitaovana taloha (na koa amin'ny hakamoana)
Raha ny tena izy, raha tonga amin'ny fampiasana fototra isika dia ampy angamba ny libreoffice, fa rehefa mila mampitaha zavatra toa ny BASE sy ny MS Access isika, libreoffice dia mijanona ao anaty pataloha ..., indraindray.
Mahafinaritra ny latabatra, saingy tokony ho adala ianao ny hino fa ny birao maimaim-poana dia tsara kokoa noho ny biraon'ny ms, fotony tsotra fotsiny ho an'ireo izay tsy mahay mampiasa ny suite, satria ampy ny fampiasana ireo style options , latabatra atiny sy lohateny, mba hahitana fa ny safidy tsy andoavam-bola dia nankany amin'ny fitoeram-pako, tsy ilaina intsony ny milaza amin'ny tranga macros amin'ny excel na rehefa mampiasa Visualbasic ianao hiteraka fiasa sy asa hafa ... mitovy amin'ny fidirana, eny fa na ny visio aza , efa ela fitaovana iray ambony avo kokoa.
ny hany fitaovana hitako fa ny fako ao anaty birao dia ilay naoty mahafatifaty, ary ilay sarotra (safidy maro ho an'ireo mpampiasa nobel) ary miaraka amin'izay koa dia tetikasa tsotra (safidy vitsy ho an'ny mpampiasa mandroso) ihany koa.
Heveriko fa tsy nisy nilaza fa tsara kokoa ny LibreOffice noho ny MSOffice. Ny latabatra dia tsy miresaka afa-tsy ny lesoka amin'ny iray ary ny iray hafa .. 😉
Mazava fa misy ny fanatisme amin'ny andaniny sy ny ankilany.
Samy LO na MSO dia samy manana fitaovana tsara hamoronana tabilao atiny (na karazana index hafa). Saingy ny fitaovana LO dia manana safidy maro hafa ary azo ovaina kokoa.
Ny toerana nilatsahan'ny LO dia ao amin'ny fitaovana ho an'ny bibliographies (karazana index) dia manampy betsaka ny bibus, saingy mbola rafitra iray izay mamela zavatra be faniry izy io
Ny lohateny dia soratra fotsiny amin'ny ankapobeny milanja havanana sy misy sora-mandry, hita eo ambanin'ny lohatenin'ny antontan-taratasy sasany, tsy mino aho fa mila fitaovana manokana hanaovana fanazavana.
Ny biraon'ny Libre dia vahaolana tsara, manaitra ny mpanaraka azy foana, faooooo toa ny zava-drehetra hatrany an-damosin'i MsOffice, indraindray mahazo hevitra avy any ambany amin'ny tanany izy ireo fa ny hafa kosa tavela vetivety, MSO dia efa tonga miaraka amina fonosana ao anatin'io LO io na tsy mitondra azy ireo ny OO ary tsy haiko raha hanana azy ireo indray andro any, na izany aza, ny solontenan'ny MSwindows vaovao izay heveriko fa tsy hitsangana firy. ho an'ny olana izay mampiavaka ny maizina, tompoko ary averiko amin'ny admin ny tranokala: Elav sy Kckagegara.
WTF? Aty ianao? Na lainga .. Tsy mino aho ..
WTF !!! 0_0… efa manana fidirana amin'ny Internet ve ianao? 😀
Zerox dia hoy izy:
Avy amin'ny latabatra dia tsy misy fanamarihako, heveriko fa fampisehoana namboarina mba hanaovana idealista LO.
Azoko tsara ny lafiny roa amin'ity fifanakalozan-kevitra ity, ho olombelona foana isika ary toy ny any amin'ny magazay ihany ny mpampiasa no misafidy izay mety indrindra hiasantsika. Mpiaro ny hevitry ny tsirairay sy ny fanapaha-keviny aho, tsy hanery hanery olona hampiasa programa iray na iray hafa mihitsy aho; rafitra miasa iray na iray hafa. Tsy maintsy malalaka ny olona hisafidy izay tiantsika, raha te handoa ny W8 isika satria tiantsika izany ary mahazo aina isika satria tsy tokony ho antony hanaovana adihevitra izany. Heveriko manokana fa ny LO sy ny OO dia vokatry ny asa sarotra ary tiako ny ataon'izy ireo mba hahafahan'ny olona manana safidy mifaninana bebe kokoa amin'ny M $ Office. Nahita rindrambaiko maimaim-poana nitombo aho ary nampiasako azy io foana ary afa-po tamin'ny fahombiazany aho, na dia mbola lavitra aza ny lalana tokony halehany ary zavatra maro no tokony hatsaraina.
Mamaly an'i Zerox
Damien dia hoy izy:
Tokony handefa sary voadika izy ireo. Fampitahana tena tsara.
Valiny tamin'i Damien
Opera dia mankany amin'ny Webkit